Jolie oo ka tirsan Shirka Caalamiga ah ee Joojinta Rabshadaha Galmada ee Colaadda 2014
Ergeyga Gaarka ah ee Gudida Sare Qoxootiga Qaramada Midoobay
Abriil 17, 2012
Xafiis la aasaasay
(1975-06-04) Juun 4, 1975 ( 46jir)
Los Angeles, California, Mareykanka
Angelina Jolie (/dʒoʊˈliː /; hore Jolie Pitt, waxay dhalatay Juun 4, 1975) waa jilaa Mareykan ah, filim sameeye, iyo bini'aadanimo. waxay heshay abaalmarino badan, oo ay ka mid yihiin Abaalmarinta Akadeemiyadda iyo saddex abaalmarinta Golden Globe, waxaa loo magacaabay atariishada ugu mushaharka badan Hollywood dhowr jeer.
Jolie waxay markii ugu horeysay shaashaddeeda ka soo muuqatay iyadoo caruur ah oo ay weheliso aabaheed, Jon Voight, oo ku jira filimka Lookin’ to Get Out (1982), xirfadeeda filimkuna waxay ku bilaabatay si xamaasad leh toban sano ka dib iyada oo wax soo saar miisaaniyadeed oo hooseeya ay samaysay Cyborg 2 (1993), iyadaana ku xigtay kaalinta kowaad ee filim weyn, Hackers (1995). Waxay ka soo muuqatay filimada sida weyn loo bogaadiyay ee George Wallace (1997) iyo Gia (1998), waxayna ku guuleysatay Abaalmarinta Akademiga ee Jilaa Taageerada ugu Fiican waxqabadkeedii sanadkii 1999 waxqabadkeedii riwaayaddii 1999 ee Girl, Interrupted. Doorkeeda jilaaga ah ee Lara Croft ee Lara Croft: Tomb Raider (2001) ayaa u aasaasay inay noqoto atirisho hogaamiye Hollywood ah. Waxay sii wadatay doorkeedii waxqabad ee ay la lahayd Mr. & Mrs. Smith (2005), Wanted (2008), Salt (2010) iyo The Tourist (2010), waxayna heshay amaan aad u weyn oo ku saabsan bandhigeeda A Mighty Heart (2007) iyo Changeling (2008), taas oo ku kasbatay iyada magacaabista Abaalmarinta Akademiyada ee Jilaa ugu fiican. Guusheedii ganacsi ee ugu weyneyd waxay la timid Maleficent (2014). Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa doorkeeda cod ee filimka Kung Fu Panda (2008–hada). Jolie waxay kaloo agaasintay oo qortay dhowr filim, In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014), iyo First They Killed My Father (2017).
Marka laga soo tago xirfadeeda filimka, Jolie waxaa lagu yaqaanaa dadaalkeeda bani'aadamnimo, taas oo ay ku heshay abaalmarinta Jean Hersholt Bani'aadamnimada iyo maamuuska Dame ee Amarka St Michael iyo St George (DCMG), iyo sharaf kale. Waxay dhiirrigelisaa sababo kala duwan, oo ay ka mid yihiin dhowrista, waxbarashada, iyo xuquuqda haweenka, waxaana aad loogu xusaa u doodideeda iyada oo ka wakiil ah qaxootiga, waa Ergeyga Gaarka ah ee Gudida Sare Qoxootiga Qaramada Midoobay.
Jolie waxaa loo magacaabay mid ka mid ah dadka ugu awooda badan uguna saameynta badan warshadaha madadaalada Mareykanka. Waxaa lagu xusay haweeneyda adduunka ugu quruxda badan warbaahinta kala duwan. Nolosheeda gaarka ah, oo ay kujiraan cilaaqaadkeeda, guurkeeda, iyo caafimaadkeeda, waxay ahayd mawduuc ballaadhan. Waxaa furay fanaaniinta kala ah Jonny Lee Miller iyo Billy Bob Thornton, waxayna si sharci ah uga maqantahay jilaaga Brad Pitt oo ay u leedahay lix caruur ah oo seddex ka mid ah ay korsadeen si caalami ah.
↑ Angelina Jolie Pitt on Her Most Personal Project With Brad Yet and Why She's Looking Forward to 50. Vogue.
↑ Angelina Jolie Pitt: Diary of a Surgery. The New York Times.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Angelina_Jolie&oldid=227838"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Jannaayo 2022, marka ee eheed 06:21.